Ireo no Emoji vaovao izay ho tonga tsy ho ela amin'ny fitaovantsika | Vaovao IPhone
Ireo no Emoji vaovao izay ho tonga tsy ho ela amin'ny fitaovantsika
Iza no tsy mahalala ny Emoji? Ireo tarehy kely mahafatifaty izay ampiasaintsika rehetra hanehoana ny toetrantsika amin'ny resaka amin'ny WhatsApp, Twitter, mailaka ary na aiza na aiza misy ny fifandraisana an-tsoratra. Andro vitsy lasa izay dia nilaza taminay izahay fa handeha izy ireo ampio emoji vaovao 250 hanitatra ny repertoire efa misy, satria na dia ny tarehy aza no tena mampiavaka azy, misy marika maro hafa izay maneho tarehimarika na toe-javatra mahazatra isan'andro, ary miaraka amin'ireo endri-tsoratra vaovao izay hampidirina ao, dia saika efa vita daholo ny zava-drehetra. nisolo tena. Te hahafantatra ny vaovao ve ianao? Atorinay anao ireo tabilao miaraka amin'ireo emoji rehetra tafiditra ao.
Nihevitra ve ianao fa tsy misy emoji tsy hita? Sa tsy nahita an'izany ianao? Azo antoka fa ho tonga mora raisina ny emoji "peseta" mihoatra ny indray mandeha handefa azy amin'ny alàlan'ny WhatsApp ary tsy hitanao izany, satria io dia iray amin'ireo tafiditra ao anaty katalaoginy. Ary ny fiarahabana Star Trek, manasaraka roa ny rantsan-tànana, dia lasa ampahany amin'ny emoji. Misy ihany koa ireo marika maro hafa mifandraika amin'ny toetrandro, fanatanjahan-tena, toerana mahaliana, fivavahana, karazana penina, telefaona ary valopy isan-karazany, ary koa fitaovana teknolojia toy ny calculatera, totozy, kitendry, kapila misy floppy, CD, mpanonta ... Ny tandindon'ny jiolahin-tsambo sy ny voromailala fihavanana dia tsy ampy ihany koa.
Mahaliana ny fomba nahatratrarana emoji fa na dia mangatsiaka loatra aza ny lahatsoratra indraindray mba hanehoana ny fihetsem-po, ny fihetsem-po na ny fahatsapana, noho ireo sary kely ireo dia azontsika atao tahaka ny teo alohan'ny mpanelanelana antsika isika ary afaka nahita ny endritsika. ary jereo ny feon'ny feontsika. Avelanay ho anao ny latabatra feno miaraka amin'ny emoji rehetra, ary ireo izay ho tafiditra tsy ho ela dia voamarika amin'ny mavo. Azo inoana kokoa fa ny iOS 8 dia efa hampiditra ireo toetra vaovao rehetra ireo rehefa manomboka aorian'ny fahavaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Ireo no Emoji vaovao izay ho tonga tsy ho ela amin'ny fitaovantsika
Resadresaka: Ny fisokafan'ny Apple Store ao Sol, voahodidin'ny resabe
iOS 8 dia manafina ny 3D Virtual Tour ao amin'ny application Maps